China Foni Sungira fekitori uye vagadziri | SJJ
Runhare runhare, tambo yeserura, tambo yefoni loop chero chauri kutsvaga, une chokwadi chekuwana iyo kufekitori kwedu. Inowanikwa mune dzakasiyana siyana zvinhu, kupedzisa, mavara & zvishongedzo.
Isu tinogadzira mukugadzira tambo yeserura uye tanga tichitengesa pasi rese kwemakumi emakore, iyo yatakaita ine hombe renji inowanikwa muhukuru hwakasiyana, dhizaini uye masitaera. Isu tinopa tsika dhizaini yemhando yepamusoro nharembozha kune vatengi vepasirese, kungave kwekare kana kwemafashoni dhizaini tinogona kukubatsira kuti uipedze. Isu tinopa Pantone Ruvara Chart sarudzo uye zvishongedzo kuti iwe ugadzire yako wega maserura tambo.
Tambo dzenhare mbozha dzakakodzera nharembozha, mp3 / 4 vatambi, kamera, keychain uye zvimwe zvishandiso, zvine gomba kana chiuno. Yakagadzika uye yakasununguka tambo iyo iwe yaunogona kuiturika paruoko rwako, kudzivirira mudziyo wako kubva netsaona kudonha pasi uye chengetedza chishandiso chako kuchengeteka kana uchiishandisa, zvakare bvumidza chigunwe chako kufamba kumucheto kusvika kumucheto, unogona kuzviisa nekukurumidza uye nyore. Kune akawanda masitayera emazango anowanikwa, senge zvidiki zvidimbu mavara, rhinestone kristaro mazango, uye zvidiki zvipuka zvemhuka mune zvakasiyana zvigadzirwa. Mamwe mazango anogona kutopenya kana kuvhenekera panorira foni. Mazhinji mazango ane zvakare bhero diki rakabatanidzwa kana mavara kubva kune achangoburwa akakurumbira mafranchise, senge anozivikanwa epamusoro nyeredzi kana anopisa vhidhiyo kunyangwe mitambo, kuti inogona kuve sarudzo yakanaka yemurume nemukadzi yekushongedza uye kuve yakatanhamara muhupenyu hwavo, kune zvakare mamwe mazango umo munhu angaisa pamunwe kuchenesa kuratidzwa kwechishandiso. Saka chero yako pfungwa iri, gamuchira kuti ugovane nesu uye isu tichazviita muchokwadi.
Chinyorwa: Flexible PVC, Silicone, Leather, eco-inoshamwaridzika uye isiri-chepfu
Chimiro: Akasiyana manyorerwo esarudzo yako kana tsika yako yakasarudzika dhizaini.
Zvishongedzo: Nhare mbozha tambo, D chimiro mhete, rivet, lobster clip uye 2 svetuka mhete.
Tambo dzefoni dzinopisa uye dzakanaka kune bhizinesi, kusimudzira, kushambadza, chiyeuchidzo, mitambo uye zviitiko.
Pashure: Penzura Mabhokisi & Penzura Nyaya
Zvadaro: Foni Screen Inosuka
Iphone Wrist Sungira
Runhare Grip Strap
Runhare Loop Bhandi